घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » सुरक्षा » स्यान्डल रिसोर्टहरूमा सूर्य, बालुवा र सामाजिक दूरी
एन्टिगुआ र बारबुडा ताजा समाचार • बहामास ब्रेकिंग न्यूज • बार्बाडोस ब्रेकिंग न्यूज • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • ग्रेनेडा ब्रेकिंग न्यूज • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • जमैका ताजा समाचार • लक्जरी समाचार • समाचार • पुनर्निर्माण • रिसोर्ट्स • जिम्मेवार • रोमान्स विवाह हनीमून • सुरक्षा • सेन्ट लुसिया ब्रेकिंग न्यूज • पर्यटन • यात्रा सम्झौता | यात्रा सल्लाहहरू • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
सेप्टेम्बर 4, 2020
पुरानो सैंडलहरू ग्रान्डे एन्टिगुआ रिजोर्ट, तपाईंलाई स्यान्डल रिसोर्ट्सबाट चाहिएको विलासी सबै समावेशी गोपनीयताको साथ तपाईंलाई आवश्यक ठाउँ प्रदान गर्दै।
, हो स्यान्डल रिसोर्ट्स अर्को स्तरमा सुरक्षा उपायहरू लिएको छ। तर एक लामो नजर लिनुहोस् र तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि यात्रुहरू चाहने गुणहरू भन्दा पहिले यी रिसोर्टहरूमा वास्तवमै भएका छन्।
मध्यरात भन्दा ठीक अघि, अमेरिकी एयरलाइन्सको उडान # २2405०XNUMX मा नेभिगेसन लाइटहरू यस टापुमा ओर्लिएका देख्न सकिन्छ Antigua. VC बर्ड अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा विमानको अवतरण यति धेरै महत्त्वको यो रातमा स्थानीय टेलिभिजनले कार्यक्रम देखायो। मैथ्यू कर्नेल, का महाप्रबन्धक स्यान्डल ग्रान्डे एन्टिगुआ, हेर्नेहरू मध्ये एक थियो।
टिभी वरपर आफ्ना दर्जनौं टोली सदस्यहरू जम्मा गरेका कर्नेलले यसो भने, “भावनाहरू व्यक्त गर्न गाह्रो छ।” "जब मैले वरपर हेरेँ, तब मैले उनीहरूको आँखामा आँसु थाम्नै सकिन।
वाणिज्यिक उडानको आगमनको अर्थ स्यान्डल ग्रान्डे एन्टिगुआ पहिलो हुनेछ १ Sand सैंडल सबै समावेशी रिसोर्ट्स COVID-१ open ले मार्चको मध्यमा विश्व अर्थतन्त्र बन्द गर्न बाध्य पार गरेदेखि यात्रुहरूको लागि पुनः खुला गर्न। सम्पत्तीको एक दृश्य दृश्य दिईयो, यो कहिले बन्द भएको थियो भनेर तपाईंलाई थाहा थिएन। अघिल्लो १० हप्ताको स्थिरतामा, टोलीहरूले ल्यान्डस्केपि and र पोल्सहरू उनीहरूको इन्स्टाग्राम पोजमा राखेका थिए - स्थिर तयारी अवस्था, रिसोर्ट टोली जत्तिकै।
बालुवामा सजी समुद्र तट कोठाहरू उत्तम समुद्री किनारा झुकाउने ठाउँको लागि बनाउँछ
"के तपाई सुन्नुहुन्छ?" कर्नेललले पृष्ठभूमिमा ध्वनिहरूको बारेमा सोधे। "हाँसो र गाउँदै? त्यो हामी सधैं हुन्छौं। हामी एक टोली हौं र ... म यसलाई बढ्तै परिवर्तन गर्न चाहन्न ... हामी वास्तवमै परिवार हौं। "
वातावरण अनौपचारिक र न्यानो छ। यो सामान्य जत्तिकै सामान्य हुन सक्छ, टोली सदस्यहरूले लगाएको सुरक्षात्मक मास्क र ग्लोभहरू दिएपछि, शीर्षकहरूका अनुस्मारकहरू: "यात्रा कहिले पनि एक समान हुँदैन।" सही। तपाईं कुनै पनि स्यान्डल रिसोर्टमा कुनामा घुमाउन सक्नुहुन्न बिना हेन्ड-सेनिटाइजर डिस्पेंसरलाई पार गर्दै वा कसैलाई प्रत्येक १-15--30० मिनेटमा टच पोइन्टहरू मेटाउँदै गरेको देखाउँदै, पोइन्टहरू छोईएको छ वा छैन।
तर "एक समान छैन" मा गहिरो डाइभ गर्नु भन्दा पहिले कर्नेललले केहि अन्य चीजलाई जोड दिन चाहान्छन् जुन सबै स्याण्डल गुणहरूमा महत्वपूर्ण छ।
"हाम्रोलागि केहि चीजहरू जहिले समान हुन्छन्।"
स्यान्डल ग्रान्डे एन्टिगुआ रिसोर्ट डिकेनसन बेको सेता बालुवा समुद्र किनारको सबैभन्दा लामो छेउमा अवस्थित छ।
फराकिलो खुला परिप्रेक्ष्य
Cornall पहिले भन्दा बढि हिंड्दछ। ऊ टोलीका सदस्यहरू पारित गर्ने बित्तिकै "सुप्रभात ... शुभ प्रभात… शुभ प्रभात" भन्छन्; धेरै चोटि एयर नलिकाहरू सफा गर्न को लागी जिम्मेवार धेरै पाहुनाहरु एक सूट प्रस्थान र सतहहरु मा कालो बत्तीहरु को उपयोग को लागी कुनै आवारा त्रुटिहरु छन् सुनिश्चित गर्न को लागी।
ऊ लिफ्टमा रोकिन्छ र दुई व्यक्तिलाई अर्को सवारी लिन अनुमति दिन्छ। ऊ नम्र हुँदै भन्छ, “एक पटकमा एक दम्पती। जब ऊ तेस्रो तल्लामा पुग्छ, ऊ अवतरण माथि जान्छ र फेरि रोकिन्छ।
"मलाई लाग्छ कि हामी सबैले हतार-हतार हुन र हाम्रा वरपरका बारे बढी सचेत हुन सिक्यौं।"
रोमान्स र रमाईलोको लागि निर्मित, भूमध्य गाउँ पूल स्यान्डल ग्रान्डे एन्टिगुवामा मनमोहक ताजा पानी पूलहरूमध्ये एउटा हो र स्यान्डलको आइकनिक स्विम-अप पूल बारको घर।
जहाँ उहाँ उभिनुहुन्छ, तपाईंको आँखा एक जोडी अनुसरण गर्न को लागी एक प्यारा को एक अतिरिक्त-विशाल मार्ग संग पैदल गर्न को लागी एक humongous पोखरी को पछाडि र पछाडि एक एकदम नीलो आकाश र एक bluer समुद्र सम्म। यो सबै स्पेसमा मर्ज हुँदै छ जुन दर्शनीय अनन्त छ। दृश्य आफैंमा जहिले पनि पहिले जस्तै थियो, तर परिप्रेक्ष्य "कहिल्यै एक हुन सक्दैन" किनभने सबैले पहिले भन्दा बढि ठाउँ चाहदैन?
"छ महिना अघि, दम्पतीहरू यहाँ रोकिन्छन् र सायद आधा मिनेट को लागी 'ooh' र 'आह' भन्छन्," कर्नेल भन्छन्। “अब यो पाँच मिनेट छ। तिनीहरू बस निस्केर हेर्छन् र सास फेर्छन्। "
क्यारेबियन महासागरको हावा महसुस गर्नुहोस् तपाईको निजी बाल्कनीबाट स्यान्डल ग्रान्डे एन्टिगुवामा आइडिलिक समुद्री हेराई।
यस टिप्पणीको साथ उनी यात्रुहरूको लागि सबैभन्दा अशुभ चिन्ताको जागरण गरी सकेका छन्: प्रयोग गरिएको हावामा सास लिनु। कुन एक कारण पछि अर्को जोडी यस्तो स्पट मा पज गर्दछ वर्णन गर्नुपर्छ। क्यारिबियन सूर्यको किरणलाई चिन्ताबाट पग्लिन दिँदै। केहि बाँकी बाँच्ने स्थिर व्यापारको हावाहरू। सास फेर्न समय लिँदै।
“इमान्दार भई, मैले आफ्नो गाउँमा भन्दा रिसोर्टमा बढी सुरक्षित महसुस गरें,” जोआना बाउमान भन्छिन् स्यान्डल ग्रान्डे एन्टिगुआ जूनमा उनको श्रीमान् एन्ड्रयूसँग उनीहरूको विवाहको वार्षिकोत्सव मनाउन। "कर्मचारीहरूले हामीलाई पहिले भन्दा बढी सुरक्षित महसुस गरे, तर एकै साथ हामीले त्यो रमाइलो स्यान्डल Vib पनि हराएनौं।"
खुला दृश्यहरू, खुला दिमाग, र खुला ठाउँहरू केवल तेस्रो-कथा बालकनीमा घटना मात्र होइन Antigua। यहाँ जे सत्य छ त्यहि सत्य हो जहाँ दम्पतीहरूले सास फेर्छन् १,००० माईल टाढा, स्यान्डलको गृह टापुको सबै मार्गमा जमाइका.
रोमान्टिक स्यान्डल दक्षिण कोस्ट ओभर-द-पानी बंगलाहरू, गोपनीयता र एक्लोकेसनका लागि उत्तम।
जमैकाको स्यान्डल साउथ कोस्टको पश्चिमी तर्फ फराकिरहेको बालुवाको लामो स्वाथ बिहान :8::30० सम्म खुट्टाको मुनि भने समुद्री किनारको रूपमा छुट्टिएको छ, लामो बोर्डवाकको अन्त्यमा ओभरटर सुइटहरू यत्तिकै दृश्यमा अझै टाढा छन्। चन्द्रमा। त्यहाँ कोही बाहिर छ कि छैन भनेर भन्न असम्भव छ, जहाँ समुद्रको हावा बाहिरी भिजाउने टबहरूमा बग्दछ र अन्ततः समुद्र तटको छेउमा खुला एयर रेस्टुरेन्टहरूमा। यी "सँधै समान" - एकान्तता, हावा, उष्णकटिबंधीय हावा - खाली बाक्लो पुस्तिकामा पाइने कडा प्रोटोकोल जत्तिकै विच्छेदन स्वच्छताको स्यान्डल प्लेटिनम प्रोटोकलहरू.
स्वच्छताको सैंडल प्लेटिनम प्रोटोकलको अंशको रूपमा, सबै टोलीका सदस्यहरूले सुरक्षा अनुहार लगाउँछन् र उनीहरूको न्यानो आँखामा हाँस्दै देखिन्छ।
“हामीले प्रत्येक रिसोर्टमा निरीक्षण टोलीहरू समर्पित गरेका छौं जसले चिकित्सा पेसाकर्मी, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), र प्रत्येक देशका स्वास्थ्य मन्त्रालयको कडा मार्गदर्शनलाई पालना गर्छन, जुन हामी प्रत्येकलाई घर भन्छौं, "स्यान्डल रिसोर्ट्सका संस्थापक र अध्यक्ष, गोर्डन" बुच "स्टुअर्ट भन्छन्।
चप्पल जहिले पनि सफाई र सुरक्षा प्रोटोकलको उच्च मापदण्ड पालन गर्दछ, र अब अतिरिक्त उपायहरु संग, अतिथिहरु मन शान्त हुन सक्छ जब क्यारिबियन मा आफ्नो रोमान्टिक भाग्न मजा लिने।
सयौं विवरणहरू मध्ये: पोखरीहरूमा पानी हरेक घण्टा जाँच गरिन्छ। हरेक सतह - ढोका कफि निर्माताहरु लाई ह्यान्डल गर्दछ - दिनको कम्तिमा तीन पटक निरीक्षण गरिन्छ। बार मल र तालिकाहरू टाढा टाढा तानिन्छ। डाइभ गियर तुरुन्तै स्यानिटाइजेशन समाधानमा भण्डारण हुन्छ। कालो बत्तीको उपस्थिति जत्तिकै स्प्रे र पछाडि निरन्तर हुन्छ।
तर सम्भवतः सब भन्दा प्रभावकारी "प्रोटोकल" एक दशकौं देखि भइरहेको छ।
"रोमान्स गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता। हाम्रोलागि यो सँधै एक्लोपना ... लक्जरी… प्राइभेसीसँग पर्यायवाची भएको छ।
बालुवामा सजी समुद्र किनारको झुप्पाले उत्तम समुद्री किनारा झुकाउने ठाउँको लागि बनाउँछ।
जोडीहरूले व्यक्तिगत समुद्री तट क्याबानाको मजा लिइरहेका छन्, किनकि प्रेमलाई सँधै गोपनीयता र एक्लोपेशनको आवश्यकता पर्दछ - यो अवधारणा जुन स्यान्डल रिसोर्ट्सले सुरुमा आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्यो।
अर्को शब्द दिमागमा आउँछ: सामाजिक दूरी। फेरि हेर्नुहोस् ओभरटर विलाहरू, एक्लो क्यारिबियन समुन्द्रमा। वा रोन्डोवाल सुइटहरू बीच बीचमा दूरी सेन्ट लुसिया। वा स्काइपूल सुइटहरू भित्र हावामा उडिएको फेदर द्वारा मात्र पहुँच योग्य ग्रेनेडा। "सामाजिक दूरी" दैनिक भाषाको लागि नयाँ हुन सक्छ, तर यो रिसोर्टहरूमा यो नयाँ अवधारणा होइन।
एउटा स्यान्डल ग्रेनाडा स्पाइपूल सुइट, यति निजी कि एउटा लुकाउने दृश्य र पौडी केवल तपाईंको बालकनी मात्र हो।
"वास्तवमा, हामीले कहिले पनि महसुस गरेनौं कि हामी सैंडलमा एउटा भीडमा छौं," बौमान भन्छन्। "यो हामी यो हुन चाहानुहुन्छ जस्तो विशिष्ट छ, तर अब यो पूर्ण भिन्न स्तरमा छ। उनीहरूले सबै थोक खाली गर्न धेरै सोच राखेका छन्, र यसले हामीलाई आउने मिनेटमा सुरक्षाको बारे सहज बनाउँदछ। र त्यसपछि ... यो रिसोर्ट सबै हाम्रो थियो जस्तो लाग्यो। "
विचारलाई अभिनव भनियो, क्रान्तिकारी पनि, स्यान्डलको क्वेस्टमा यसका लागि परम रोमान्टिक अनुभव अब भाग्यशाली देखिन्छ। निजी अनन्त-धार पूलहरू. निजी वरन्डामा टबहरू. निजी इन-सूट बारहरू। दुई माईल लामो समुद्री किनारमा, दम्पतीहरूले व्यावहारिक रूपमा एक एकर बालुवा दाबी गर्न सक्छन्। १० 105 भन्दा बढी निजी पोखरी, सात वटासम्म मुख्य मुख्य पोखरी, र १ 16 समावेश गर्ने निर्णयहरू रेस्टुरेन्ट एक विशाल सम्पत्ती मा भीड आकर्षित गर्न को लागी कहिल्यै भएको छैन। यो तिनीहरूलाई कम गर्न को लागी हो।स्यान्डल-रोयल-
एक सैंडल रोयल बार्बाडोस रॉयल रोन्डोवल बटलर सुइटमा दाँया डुब्नुहोस्; एक रोमान्टिक एस्केप जुन आफ्नै निजी पोखरीको साथ आउँदछ र एक विलासी शान्ति दुईको लागि भिज्ने टब।
कहिलेकाँही, एक अन्य व्यक्ति देखा पर्दछ: बटलर। यस्तो सूटमा जोडीहरूको लागि, बटलर केवल मानवीय टचपोइन्ट हो - सेतो ग्लोभ्स प्रयोग गरेर। के पाहुनाहरूले याद गरेनन् कि प्रत्येक बटलर, र प्रत्येक एकल टोली सदस्य, सम्पत्तीमा आइपुगेपछि नयाँ दैनिक तालिकामा जान्छन्। एक तापक्रम जाँच, लुगा परिवर्तन अनिवार्य परिवर्तन, र जुत्ता सफा र कीटाणुरहित गर्न एक "जुत्ता नुहाउने" छ।
सफ्टवेयर सफा हुनु स्टाफ बाहिर र सबै पाहुनाहरूका सुइटहरूमा पनि फैलिन्छ। यो अर्को स्टप-अण्ड-लिनुहोस्-यो क्षणमा छ। नरम कपडा भर्खरै उकालेको छ, सेनिटाइजर स्टेशन भरिएको छ, बाथरूम अस्पताल ग्रेड उत्पादनहरु संग कीटाणुरहित। बेडफ्रेम देखि स्लाइडिंग बरामदा ढोका सम्म हरेक उपद्रव, परीक्षणहरू पार गरीसक्यो।
“अब, बोतलहरू पनि एप्पलटन एस्टेट हस्ताक्षर ब्लेन्ड र रबर्ट मोन्डावी ट्विन ओक्स "चम्किरहेछन्," कर्नेल भन्छन्।
स्यान्डल ग्रान्डे एन्टिगुआ, जहाँ गोपनीयता सधैं एक लग्जरी भएको छ, र सेतो बालुवा र पीरोजा पानी मानक छन्।
जब जब जोआना र एन्ड्र्यू बाउमान एक रेस्टुरेन्ट वा समुद्र तटमा हिड्थे, तिनीहरू वरिपरि हेरेर सुन्थे। जोआनाले भनेझैं, "परिचित चप्पलहरू हामी मार्न आएका थियौं।" यदि केहि पनि छ भने, यो vibe गाढा छ। यो अपरिहार्य छ। र - मात्र ईमानदार हुन र शब्द भन्न - यो संक्रामक हो। आकस्मिक मुडमा सास फेर्न र सार्न र पिउन स्वतन्त्रता अत्यन्तै संक्रामक हो। फर्कने पहिलोको बीचमा रहेको व्यक्तिहरूबाट लिनुहोस्: यो जहिले पनि समान छ, र हुनसक्छ यो पहिलेभन्दा पनि राम्रो हो।
लेखक, रबर्ट स्टीफनस, २०+ बर्षका लागि पति र छोरीहरूका बुबा हुन्; रबर्टको प्राथमिकता परिवार, समुदाय र एक बटलरको रूपमा संक्षिप्त स्टिन्टहरू, समुद्री किनार ग्रूमर, र स्यान्डलमा क्रेप "शेफ" ले उसको यात्रा र लेखन परिप्रेक्ष्यलाई आकार दिन्छ।